Endowment poten Endurobol (317318-70-0) - Phcoker
Rano Endurobol roila (317318-70-0)
Row Endurobol Raw dia fantatra ihany koa amin'ny GW-501516, ny olona sasany dia mety hiantso azy io ho Cardarine. Noho ny Endurobol manana .......
fahafahana: 1290kg / volana
SKU: 317318-70-0 Sokajy: Serasera Sarmana
Rovan'ny Endurobol ra (317318-70-0) video
Endowment potent Endurobol (317318-70-0) Description
Rano Endurobol Rao dia mpitsabo PPARδ. Izy io dia mavitrika ireo dingana mitovy amin'ny fampiharana, anisan'izany PPARδ sy AMP-activated kininina proteinina. Nodinihina ho fitsaboana mety ho an'ny matavy loatra, diabeta, dyslipidemia ary aretim-bovoka. Ny poofa Endurobol Raw dia misy fiantraikany eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny AICAR: ny fampiendrehana dia naseho mba hampitombo ny faharetan'ny fanatanjahantena amin'ny fianarana biby fa tsy ny firaisana fotsiny.
Ny vovon-tsolika Endurobol dia azo ampiasaina amin'ny atleta ho toy ny ergogenic fanafody mampitombo avo lenta izay tsy fehezin 'ny fitsipika na tsikaritra avy amin'ny fitsirihana tsy tapaka. Ny iray tamin'ireo mpikaroka fototra avy amin'ny fianarana momba ny fiaretana maharitra dia namolavola fitsapana urine mba hahitana ny zava-mahadomelina, ary nomeny ho an'ny Komity Olaimpika Iraisampirenena.
Rano Endurobol ra (317318-70-0) Specifications
Product Name Endowulfol Endulobol
Anarana simika 2-[2-methyl-4-[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfanyl]phenoxy]acetic acid;GW-501615;CB6465728;2-(4-((2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-methylthiazol-5-yl)methylthio)-2-methylphenoxy)acetic a;GW1516; GSK-516.
Brand Name Endowulfol Endulobol
Drug Class Inhibitors, Chemicals Intermediates & Fine; Pharmaceuticals; Sulfur & Selenium Compounds; kl; Inhibitor; Antineoplastic; SARMs (Modulator receptor receptor); Sarms
CAS Number 317318-70-0
molekiolan'ny Formula C21H18F3NO3S2
molekiolan'ny Wvalo 453.494 g / mol
Monoisotopic Mass 453.068 g / mol
Melting Point 134-136 ° C
vayma- Point 584.543ºc amin'ny 760mmhg
Ny antsasaky ny biolojia 16-24 ora
Solubility DMSO: soluble20mg / mL, mazava
Endowulfol Endulobol Application Ny agonista PPARβ sy selanina dia azo lazaina ho marary fanandramana natao mba hifehezana ny molekiola ary hampitombo ny haavon'ny HDL, na ny kolesterola tsara, ao amin'ny rà. Ny cellule-permeable, thiazolyl compound that acts as a powerful, high affinity, agarist PPARδ.
Roila roapolo vita amin'ny Endurobol (317318-70-0)
Mba hahafantarana izay endurobol dia mila mahatakatra izay tsy azy ianao. Raha ny ankamaroan'ny olona dia miteraka endurobol amin'ny sokajin'ny SARMs, io fikambanana simika io dia tsy SARM, fa ny agarista PPTERa (delta).
Zava-dehibe ny manavaka ity zava-misy ity satria ny hery ambaran'ny endurobol amin'ny vatana dia manohitra ny SARM maro. Ny endriky ny Endurobol dia matetika dia miteraka amin'ny fanamafisana ny fatran'ny otrikaretina raha maro ny SARM dia ampiasaina manokana ho an'ny tanjona anabolika, toy ny fanorenana hozatra sy tanjaka.
Rehefa miresaka kely isika aorian'izany, dia mahatonga endurobol safidy tsara ho an'ireo izay mikatsaka ny hampihenana ny tavy avy amin'ny vatana miaraka amin'ny fanatsarana ny tombontsoa hafa mifandraika amin'ny metabolika.
Eo ambany baikony momba ny simika GW-501516, endurobol dia nipoitra voalohany indrindra amin'ny fitsaboana dyslipidemia; na ny tavy ary ny kolesterol ao amin'ny ra. Saingy vao nanomboka ny fisedrana dia nanjary hita fa ny endurobol dia mety manana tombony ara-pahasalamana hafa.
Ankoatra ny fanatsarana ny lipidin'ny lipida, dia tsapany fa endurobol amin'ny agonist receptor PPAR dia mety ho fitaovana matanjaka amin'ny fikarakarana ny atin'ny rongony, manatsara ny fatran'ny metabolism ary mety hanakana na hanasitrana ny aretina amin'ny metabolika toy ny Type II Diabetes.
Saingy rehefa mianatra haingana ianao, ity fahatsapana fahagagana ity dia tsy misy tsy fahampian'ny fahadisoany, ny sasany amin'izy ireo dia manan-danja.
Endowment potent Endurobol (317318-70-0) Mechanism de Action
Ny rafitra Endurobol dia mitovy amin'ny an'ny SARMs. Io no iray amin'ireo fifandraisana mahaliana indrindra hitako. Ity chemicalic ity dia ahafahan'ny vatana manampy amin'ny fanaraha-maso ny metabolisma asidra somary mahatalanjona.
Araka ny voalaza tetsy aloha, Endurobol dia agonist mpikirakira PPARδ ary tsy tokony hikorontana amin'ny SARM. Amin'ny ankapobeny, ny atao dia ny mampihetsika ny proteinina PPAR-delta ao amin'ny sela ao amin'ny vatana. Ny PPAR-delta dia sensor ho an'ny asidra, izay hita ao amin'ny hozatra. Rehefa tapitra ny delta PPAR, dia mitombo ny fahafahanao manatsatra ny tavy.
Natao koa ny fianarana natao ho an'ny totozy. Nomena nomerika Endurobol ny totozy ary nihamaro ny fiaretany.
Endurobol dia singa tena mahafinaritra mahavariana izay mampihena ny fahaiza-manaony. Manana fahaizana manatsara ny fiasanao izy satria tsy misy fanafody hafa. Ny fahatsapan'ireo vokatra tsara ireo tamin'ny fandalinana dia mahatonga azy io ho tsara kokoa.
soa ny Rohan Endurobol Row (317318-70-0)
◆ Ny zavatra voalohany azonao antenaina amin'ny Endurobol dia manatsara ny fahombiazan'ny karazam-borona. Ny fandinihana dia mampiseho fa Endurobol dia nanatsara ny fihazakazaky ny tebitebin'ny totozy amin'ny fitsapana fandeferana. Ny fitomboanao dia hihamatanjaka toy ny tsy nisy hatramin'izay, dia te-hanosika ny tenanao ianao. Satria manatsara ny fitandroana sy ny fiaretana dia voarara ny WADA amin'ny fanatanjahan-tena rehetra. Ity dia tokony hanome anao ny hevitry ny hoe marina ny GW501516 matanjaka.
◆ Ny zava-dehibe manaraka momba an'i Endurobol dia ny fandoroana haingana ny tavy. Eny, marina izany - ankoatra ny fihenan-tsakafo, dia handoro haingana koa ny tavy. Hanampy anao hihazona ny hozanao koa izy, raha tsy salama tsara. Ny sasany aza dia mametraka ny GW-501516 amin'ny SR-9009 mba hamoronana milina mirehitra. Matokia ahy, GW501516 dia mahery noho ireo zavatra hafa efa nosedraina.
◆ Endurobol koa dia mety hisy fiantraikany tsara eo amin'ny fo sy ny fantson-dra. Ny fandinihana natao tamin'ny totozy dia nampiseho fa kely ny dosur Endurobol dia nitarika fahavoazana natao tamin'ny tissue tao amin'ny arteries. Tadidio fa natao tamin'ny totozy ny fianarana, ka tsy azo antoka tanteraka raha mihatra amin'ny olombelona koa izany.
◆ Ilaina ihany koa ny manamarika fa ity fitambaran-javatra ity dia afaka manatsara ny fitomboan'ny taova. Amin'ny fampidirana ny PPAR-Delta dia tsy vitan'ny hoe matavy fotsiny ny tavy, fa ny fihenan'ny tsiranoka ihany koa.
◆ Tsy misy fanafoanana ny rafitra hormonina voajanahary. Tsy toy ny amin'ny testolone, Endurobol dia tsy hisy fiantraikany amin'ny level testosterone anao, izay midika fa tsy mitaky PCT izany. ◆ Endurobol dia mety handray andraikitra lehibe amin'ny fanasitranana ratra.
Rantsana Endurobol Rantsana Recommended (317318-70-0) Dosage
Ny dosage dia teo anelanelan'ny 2.5 ka hatramin'ny 10mg isan'andro nandritra ny fianarana.
Ho hitanao ny mpampiasa mandray ny 30mg amin'ny Endure Pulmonara Endurobol isan'andro. Amin'ny ankapobeny, ireo olona izay manao izany dia tena za-draharaha ary efa nahavita izany imbetsaka tamin'ny lasa. Tena miezaka ny miala amin'ny dosia avo indrindra aho satria misy fanazavana kely misy.
Endurobol dia manana ny antsasaky ny fiainana 12-24. Midika izany fa tsy maintsy ampidirina indroa isan'andro ianao. Ny ankamaroan'ny olona dia mandroatra indray mandeha indray maraina ary indray mandeha amin'ny hariva, dia hitazona ny haavony eo amin'ny vatany izany.
Ny halavan'ny vanim-potoana dia tokony mihoatra ny herinandro 6-8. Indray mandeha indray, mety ho hitan'ny mpampiasa sasany fa tsy mihoatra ny herinandro 8 izany fa mety ho loza izany. Manoro soso-kevitra foana aho ny hilalao azy io ary hitazona ny dosage ambany ary ny halavan'ny bisikileta dia fohy.
Endurobol dia tsy mitaky ny PCT, azonao atao fotsiny ny manohy azy io aorian'ilay finiavan'ny fotoana.
Ny olona sasany koa dia hametraka ity fitambaran-kitay ity miaraka amin'ny poety Ostarine sy ny poeta Andarine mba hamoronana siramamy SARMs. Saingy noho izy ireo dia tena mahomby amin'ny fitehirizana ny hozatra.
Side effects ny Rohan Endurobol Row (317318-70-0)
Na dia eo aza ny zava-misy dia tena mahatalanjona ny tombontsoa azo avy amin'ny Endurobol, tsy misy tsy fahampian'ny fahadisoam-panantenana ary indrisy fa mety ho antony hisorohana ny fampiasana ny vombony manontolo.
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny SARMs sy ny agonist receptor PPAR dia ny hoe izy ireo dia matetika tsy misy androgenic ary mikendry taratra manokana. Midika izany fa matetika dia voafetra ny vokany ary tsy henjana, ary amin'ny Endurobol dia marina izany. Amin'ny ankapobeny, ireo mpampiasa ny Endurobol dia tsy mitatitra na inona na inona fiantraikany mahery vaika.
Na dia izany aza, Endurobol dia manana olana goavana roa, fa maro no mailaka miala: ny mety ho voan'ny kansera sy ny fahavoazana.
1 famerenana for Rano Endurobol roila (317318-70-0)
Manana vovoka Endurobol mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy madio!
Rohila YK-11 roahina (431579-34-9)
Ny poeta YK-11 dia an'ny vondrona mpikatroka miverimberina mpanara-maso (SARM). Amin'ny ankapobeny, inona no ataon'ity YK11 ity ...
fahafahana: 1470kg / volana
Rohamena S4 (401900-40-1)
Ny vovony S4, fantatra koa amin'ny anarana hoe Andarine, dia mpanolontsaina modifier (androgen) amin'ny sela (SARM). S4 SARM dia heverina fa iray amin'ireo ..........
fahafahana: 1489kg / volana
Raw MK-2866 roja (841205-47-8)
Ny voly MK-2866, izay matetika antsoina hoe MK-2866, Ostamuscle na Enobosarm, dia iray amin'ireo anabolika azo antoka sy mahomby indrindra ....
Rohany S-23 roahina (1010396-29-8)
Ny S-23 dia voadidy ho an'ny bakteria azo ampiasaina amin'ny endri-tsolika, izay tsy voatery hitovy amin'ny sela androgen (SARM) izay voaporofo fa mampitombo ny feny ...... ..
fahafahana: 1360kg / volana